युवतीको आक्रमणमा परेका नेपाली चालक विश्वभर भाइरल, सहयोगमा उठ्यो ५० हजार डलर – Digital Khabar
२८ फागुन, एजेन्सी । अमेरिकामा एक नेपाली चालकमाथि युवतीहरुद्वारा दुव्र्यवहार भएको भिडियो यतिबेला विश्वर भाइरल भइरहेको छ । अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा उबर (एक प्रकारको ट्याक्सी जस्तै सवारी साधन) चालक रहेका शुभाकर खड्कामाथि तीनजना युवतीहरुले दुर्व्यवहार गरेका हुन् ।
ललितपुर घर भएका चालक खड्का सन् २०१२ मा अमेरिका पुगेका थिए । उनी त्यहाँ उबर चालकको रुपमा काम गर्दै जीवन निर्वाह गरिरहेको बताइएको छ । (एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा)
प्याज खेती कसरी गर्ने ? सरल र सहज उपाए! – Digital Khabar 1 month ago
[…] प्राङ्गारिक र गोबर मल – करिब २ टन […]